छालामा एलर्जी भयो ? नआत्तिनुहोस् तपाइँको घरमै छन् ओखती , यस्तो कार्य गर्नुहोस्
पछिल्लो दशक बढ्दो प्रदूषण र धुवाँधुलोका कारण मानिसको छालामा नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको छ ।
सोमवार, कार्तिक १५, २०७८ ११:३१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। पछिल्लो दशक बढ्दो प्रदूषण र धुवाँधुलोका कारण मानिसको छालामा नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको छ । प्रदूषणका कारण अनुहारमा डण्डीफोर तथा अनेक दाग आउने समस्या नै छालाको एलर्जी हो । छाला रातो या निलो हुनु, चिलाउनु तथा दाग देखिनु छालामा एलर्जीका लक्षण हुन् ।
कहिलेकाहीँ कीराको टोकाइबाट पनि यस्तो समस्या देखिनसक्छ । गलत औषधि, विभिन्न रसायनयुक्त साबुन, लोसनको प्रयोगबाट पनि छालामा एलर्जी हुनसक्छ । यस्ता एलर्जी कुनै केही दिनमै निको हुने खालका त कुनै महिनौंसम्म दुःख दिने खालका हुन्छन् । कतिपय एलर्जी एक ठाउँबाट सुरु भई शरीरभरि फैलने खालका हुन्छन् ।एलर्जी पूरै शरीरमा फैलिए घातक हुनसक्ने भएकाले तत्काल उपचार जरुरी छ । कतिपय एलर्जीको उपचार घरेलु सामग्रीको प्रयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ । शरीरमा नकारात्मक असर नगर्ने त्यस्ता घरेलु ओखतीको प्रयोग गरी छालाको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
बरफ– हातखुट्टा सुन्निएमा, पोलेमा, फुलेमा, चिलाएमा वा छालासम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा चिकित्सकहरू वरफले सेक्न सुझाव दिन्छन् । सुन्निएको ठाउँमा वरफले सेकेको खण्डमा सुन्निएको भाग तुरुन्तै बस्न थाल्छ भने चिलाउन समेत कम हुन्छ ।
नीमको पात– छालासम्बन्धी समस्यामा नीमको प्रयोग लाभकारी मानिन्छ । नीममा एन्टी फगल, एन्टी एलर्जिक तथा एन्टी व्याक्टेरियल तत्व हुन्छ । नीममा पाइने यी तत्वकै कारण नीमलाई कुनै पनि रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
के हो महिनावारी ‘कप’? कसरी प्रयोग गर्ने?
यूरिका राजभण्डारी - बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८ १०:४५
नेपाल अनलाइन पत्रिका - काठमाडौं। महिनावारी बेला तपाईं के प्रयोग गर्नुहुन्छ ? हामीमध्ये धेरैलाई यसबारे थाहा नहोला। कतिले त नाम पनि सुनेका छैनौं होला। हाम्रो...